Ny olan'ny zava-manahirana ... er ... Widgets | Martech Zone
Androany dia nisakafo atoandro niaraka tamin'ny ekipanay tany am-piasana aho ary niresaka tamin'ny alàlan'ny teknolojia widget. Tsy mpankafy widgets aho raha milaza ny marina. Mino aho fa matetika izy ireo dia manaparitaka ny fitohizan'ny sary ao amin'ny bilaogy iray, manelingelina ny sasany amin'ireo bilaogy, ary matetika no namboarina mba hisarika ny saina ho amin'ny tenany fa tsy ilay tranonkala.
Na manampy ianao gadget or gadget ho an'ny bilaoginao, tranokalanao, pejinao iGoogle na koa ny biraonao… ireo widget dia heverina fa hanamora ny fampidirana azy raha tsy mila fandaharana. Apetaho fotsiny ny kaody na sintomy ny widget ary miala ianao.
Ny loharano tiako indrindra hijerena Widgets dia Mashable, saingy tsy hitako ny fametrahana azy ireo matetika. Mitady tombontsoa ho an'ny mpamaky foana aho ary matetika tsy mahita. Angamba hametraka widget aho raha misy tombotsoan'ny motera fikarohana, fa ny ankamaroan'ny widget dia mavesatra ny sisin'ny client sy ny angona voangona dia tsy hitan'ny botan'ny motera fikarohana velively.
Ny olana hafa amin'ny widget dia ny ampahany iray tsy mifanaraka amin'ny rehetra. Ny widget tsara indrindra avy amin'ny fomba fijerin'ny mpamorona dia tsy voatery ho ilay widget tsara indrindra amin'ny fahitan'ny mpampiasa azy. Hitako hatrany hatrany ity… Tsy afaka mandoko widget fotsiny aho mba hampifanaraka ny fiasa sy ny endrik'ilay tranokalanako. Clears spring manana mpanaraka marobe amin'ny maha-mpitarika azy amin'ny widgetry… manome tsy manam-paharoa Analytics ary ny fanarahan-dia amin'ny widgets.
Tsy azoko antoka fa efa nahatakatra soatoavin'ny orinasa aho! Mora manintona mankany aho fampidirana amin'ny alàlan'ny API satria afaka mifanandrify amin'ny endrika sy tsapan'ny tranokalako aho, manampy fampiasa fanampiny ary angamba manararaotra ny hatsaran'ny motera fikarohana.
Hoan'ny Rindrambaiko ho toy ny sehatra fitorahana bilaogy Serivisy amin'ny maha-Compendium azy dia misy tombony ho an'ny widgets, na izany aza. Koa satria ny widgets dia mavesatra sy mihazakazaka amin'ny mpanjifa fa tsy amin'ny mpizara, dia tsy ataonao tandindonin-doza ny rafitra ankapobeny raha misy mampiditra banga feno. Ary koa, ny fatiantoka SEO dia mivadika tombontsoa ho an'ny fampiharana izay matanjaka tokoa amin'ny fomba fijerin'ny Search Engine Optimization. Tsy hampihena ny hatsaran'ny motera fikarohana anao ny Widgets.
Raha te hanakorontana ny pejiny ny mpanjifanay dia mety handratra ny tahan'ny fiovam-pon'izy ireo izy ireo (olona manindry ny antso hanao hetsika izay mitarika raharaham-barotra), koa mampitandrina azy ireo izahay. Miankina amin'ny fahombiazan'ny mpanjifanay izahay ka manery mafy izahay hampifanaraka azy ireo amin'ny fanao tsara indrindra amin'ny varotra an-tserasera.
Mampiasa widgets ve ianao? Tiako ny maheno izay karazana vokatra azonao.
Tags: 20122012 findayInternet finday 2012sary infografikafampidirana nomeraon-telefaona mihetsikaInternet findayseo fanaraha-maso antsotoro-hevitra amin'ny media sosialysourcetrakWordpress login
Fa maninona ianao no miresaka amiko?
26 Novambra 2008 à 12:22
Miaraka aminao aho Doug. Tena tiako ny widgets fa avelany maniry bebe kokoa aho. Te-hiditra ao anatin'izy ireo aho, manitikitika azy ireo, mampifanaraka azy ireo amin'ny tranokalako ary tsy vitako mihitsy. Noho izany dia mitodika amin'ny hard-coding sy ny fananganana tanana foana aho. Angamba aho mpanonofy fotsiny noho ny fahafaham-po azoko amin'ny fananganana zavatra ny tenako.
27 Novambra 2008 à 10:30
Lehilahy votoaty aho ary tompon'andraikitra amin'ny vokatra na tsy fahampian'ny tranokala valo, anisan'izany ny ahy. Tsaroako matetika (ary mampahory!) fa kely dia kely ny zavatra ilaina amin'ny fanodikodinana mpitsidika. Amin'ny ankapobeny, raha mametraka zavatra ao amin'ny tranokalanao ianao dia tsara kokoa ny eo mba hanatsara marina ny traikefan'ny mpampiasa sy/na hamindra ny olona mankany amin'ny fiovam-po. Ankoatra ireo zavatra roa ireo dia atahoranao ny tanjon'ny orinasan'ny tranokala.